Hentitra ny prefet sy ny governoran’Analamanga: “Hosazina avokoa ireo tsy manao arovava orona…” | NewsMada
Tsy hisangy na hamela ny gaboraraka amin’izao ny fanjakana na efa foana aza ny hamehana ara-pahasalamana. Namoaka didy ny eo anivon’ny prefektioran’Antananarivo sy ny governoran’Analamanga fa hilatsaka ny sazy amin’ireo tsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana.
Nanterin’ny fanambarana fa tsy maintsy hajaina sy harahina hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana na ilay antsoina hoe: “gestes barrières” rehetra hisorohana ny fihanaky ny tsimokaretina Covid-19. «Didina ny tsy maintsy anaovana arovava orona. Hiteraka sazy amin’ny alalan’ny fanaovana asa iombonana ny tsy fanarahana izany fepetra izany ho an’ny eto Antananarivo sy ny faritra Analamanga manontolo », hoy ny fanambarana ny faran’ny herinandro teo. Nialohavan’ny fifampidihinana teo amin’ny roa tonta izany famohanana didy sy ny tsy maintsy mbola hanajana ny fepetra izany.
Ho avy amin’ny angady sy ny harona ary ny kifafa
Midika izany fa efa eny am-pelatanan’ny mpitandro filaminana izany toromarika avy amin’ny prefektiora sy ny fiadidiana ny faritra izany ka ho avy amin’ny angady sy ny harona ary ny kifafa indray izy ireo, manomboka anio. Hanasazy ireo tsy manaraka fepetra na eny an-dalana na anaty fiara fitaterana…
Efa mivaha tanteraka sy tsy voahaja intsony ireo fepetra taorian’ny nanambaran’ny filoham-pirenena fa foana ny hamehana ara-pahasalamana. Tsy ny eto an-dRenivohitra na ny manodidina ihany fa any amin’ireo faritra mbola ahina ny ho fihanaky ny valanaretina.
Tokony samy handray fepetra koa ny any amin’ny faritra
Tokony samy ho hentitra handray fepetra, tahaka izany, koa ireo any amin’ireny distrika sy faritra ireny, araka ny efa nanambaran’ny filoha izany.
Mazava ny teny famerimberin’ny tompon’andraikitra. « Aza ny sazy sy ny mpitandro filaminana no atahorana fa fiarovana ny tenanao sy ny hafa ». Tsy mbola fantatra rahateo ny fotoana tena haharesena tanteraka io valanaretina io.